Otu esi agụ akwụkwọ na ngwụcha izu | Nhazi na ọmụmụ ihe
Maite Nicuesa | 08/01/2022 22:42 | Ọzụzụ
Kedu ka esi agụ akwụkwọ na ngwụcha izu? A na-ahazi usoro ọmụmụ ihe n'otu oge. Mgbe ụfọdụ nwa akwụkwọ ahụ na-arụ ọrụ a na ngwụcha izu. Oge kalenda nke na-emetụtakarị oge efu na atụmatụ gị na ndị enyi.
Otú ọ dị, mkpali bụ ihe na-eme ka ntinye aka nke ịmara. Onye ọ bụla na-agụ akwụkwọ n'oge Satọde ma ọ bụ Sọnde ọ bụla, nwere ebumnuche ọ chọrọ ime. Ihe mgbaru ọsọ na-eweta uru n'ọrụ gị. Nke a bụ ụfọdụ ndụmọdụ maka ịhazi.
1 1. Ebe omumu
2 2. Mepụta usoro ihe omume nwere oge ezumike
3 3. Mee mkpebi ndị kwekọrọ n'ihe ndị ka mkpa
4 4. Jiri ohere nke ụtụtụ mee ihe
5 5. Kekọrịta ndị ọzọ ọrụ ọmụmụ gị
6 6. Jiri usoro ọmụmụ ihe
1. Ebe omumu
Ebe dị jụụ na n'usoro na-emetụta itinye uche n'ụzọ dị mma. Ma eleghị anya, ị ga-ahụ ọbá akwụkwọ n'akụkụ agbata obi gị nke mepere ụzọ ya n'ụtụtụ Satọdee. Mana ị nwekwara ike ịmepụta ebe dị mma n'ụlọ maka ọmụmụ ihe na ngwụcha izu. N'okwu abụọ ahụ, ọ dị mkpa ka ị zere ihe ndọpụ uche ndị na-aghọ ihe kpatara nkwụsịtụ ugboro ugboro. Jiri teknụzụ naanị ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa ịrụ ọrụ.
2. Mepụta usoro ihe omume nwere oge ezumike
Dị ka anyị gosiri na mbụ, izu ụka na-ejikọtakarị na oge efu na atụmatụ gị na ndị enyi n'oge agụmakwụkwọ. Ya mere, ọ bụ ihe amamihe dị na ya idebe ohere na Sunday iji zuru ike na ịkwụsị. Oge n'efu nke nwere ike ịghọ ihe mkpali na mkpali imezu ebumnobi e zubere. N'ụzọ nke a, A na-ebi oge ahụ dị ka ihe nrite na-eji mbọ a na-agba kpọrọ ihe.
3. Mee mkpebi ndị kwekọrọ n'ihe ndị ka mkpa
Ịmụ ihe na ngwụsị izu anaghị adịcha mfe mgbe niile. Karịsịa mgbe ọ dị gị ka ị ga-ahapụrịrị atụmatụ ị ga-achọ ịga. Agbanyeghị, mgbe ị doro anya maka usoro ihe ndị ị ga-ebute ụzọ, nke a na-egosipụtakwa na mkpebi gị, ị na-ama ụma na-aga n'ihu na ebumnuche gị. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịtụfu ihe omume ụfọdụ. Ma ka o sina dị, Na mkpebi ọ bụla ị na-eme nke ọma, ị na-emesi onwe gị ike na ebumnobi nke ịmụ akwụkwọ.
4. Jiri ohere nke ụtụtụ mee ihe
N'ụzọ dị otú a, ị na-ebuli oge dị na Saturday na Sunday. Ibili n'isi ụtụtụ bụ isi ihe na-eme ka ọrụ agụmakwụkwọ na ndụ ezinụlọ kwekọọ. Chọta nguzozi n'usoro ihe omume gị. Ịmepụta kalenda ọmụmụ nwere ike inyere gị aka na nhazi gị. Ma ị nwere ike ọ bụghị naanị na-eduzi oge njikwa. Tọọ ihe mgbaru ọsọ ezi uche dị na ya iji nyochaa n'ime izu ụka.
5. Kekọrịta ndị ọzọ ọrụ ọmụmụ gị
Ị na-azụlite ikike onwe gị n'oge ọmụmụ ihe. Otú ọ dị, ọ bụrụgodị na ọ bụ ọrụ ị na-eme n'otu n'otu, ị nwere ike ịkọrọ ndị ọzọ akụkụ ndị bụ akụkụ nke ahụmahụ a. Ụmụ akwụkwọ ibe gị nọ na usoro yiri nke ị na-eme kpakpando. N'ụzọ nke a, ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ, ndị enyi na ezinụlọ na-eso gị n'oge usoro a. Ha na-aṅụrị ọṅụ n'ihe mgbaru ọsọ gị mezuru ma na-enye gị okwu agbamume n'agbanyeghị ihe isi ike.
6. Jiri usoro ọmụmụ ihe
Tinye àgwà na usoro ihe omume n'oge ọmụmụ ihe na ngwụsị izu. Deekwa obi abụọ ndị ahụ i kwesịrị ịkwụsị n'akwụkwọ ndetu. Site na ederede ị na-echeta ozi dị mkpa. Ma ị nwere ike ịnagide ya dokwuo anya ihe ndị pụtara ìhè. Ma ọ bụghị ya, ọ ga-ekwe omume ikpokọta amaghị ama ma ọ bụ mgbagwoju anya gburugburu isiokwu dị iche iche.
Ma jiri ya usoro omumu ihe iji nyere gị aka ịghọta na nyochaa echiche. Kanye akara n'echiche ndị bụ isi. Mepụta eserese site na data kacha ama ama. Hichaa ndetu ndị nwere ihe ngosi na-adịghị mma.
Kedu ka esi agụ akwụkwọ na ngwụcha izu? Site na mkpali, ntinye aka na ntachi obi. Iji mee nke a, jiri anya nke uche hụ ihe mgbaru ọsọ ọzọ ịchọrọ imezu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nhazi na ọmụmụ ihe » Noticias » Ọzụzụ » Otu esi agụ akwụkwọ na ngwụcha izu